Isu Tinotumira riini Ziviso reMutemo Mune Iyo UAE | Mutemo Makambani Dubai
Ndirini Patinotumira Chiziviso Chemutemo Mune Iyo UAE
gadzirisa nyaya yacho
Mhando yega yega yekurukurirano yakasarudzika inotevera kurongeka kwakarongwa-kare kana chimiro chinoteedzerwa nemunhu wese anenge achibatanidzwa. Chiziviso chepamutemo muenzaniso wekukurukurirana kwakadai kwakarongeka nemhando yaro inotsanangura mhando yeruzivo inoda kupihwa muchi ziviso uye kuti inofanirwa kupihwa sei.
Gweta reAU kana nyanzvi yepamutemo inogona kubatsira
hire gweta rine ruzivo
kutanga danho pamberi pematare edzimhosva
Izvo zvakakosha kuti iwe uteedzere fomati yekunyora uye kutumira chiziviso chepamutemo. Kana ukaitwa nemazvo, unogona kuwana rinokurumidza kugadzirisa dambudziko. Chiziviso chepamutemo chinoita kuti iwe neunopihwa mugobvumirana zvese maererano nenyaya yacho uye kudzivirira kugadzirisa nyaya yacho mudare.
Chii Chinotarisirwa Pamutemo?
Iri gwaro rakanyorwa rinotumirwa kubva kune anotumira kuudza anenge achizochitambira nezvezvinangwa zvekutora matanho epamutemo pamusoro peanotevera. Anotumira anoita kuti ari kugamuchira azivise zvichemo kuburikidza neyemutemo ziviso. Inoshanda seyambiro yekupedzisira kune unogashira kugadzirisa nyaya yacho kana kutarisana nedare redzimhosva.
Icho chiziviso chepamutemo gwaro rakareruka asi rinoda huwandu hwakanyanya hwekuchenjerera mukuratidzira kwayo kuendesa meseji yacho zvakakwana. Gweta reAU kana nyanzvi yezvemitemo inogona kubatsira kuisa pamwechete chiziviso chepamutemo chiri pamusoro pemitemo iripo yenyika. Chiziviso chepamutemo chinofanirwa kunge chine nyaya yaanotsvaga kugadzirisa, gadziriso yakatsvaga uye nguva chaiyo iyo nyaya iri kutarisirwa kuti igadziriswe, uyezve yotumirwa kuburikidza nesainzi yakanyoreswa.
Pakutumira Yemutemo ziviso
Kutumira chiziviso chepamutemo nguva dzose inzira yakanaka yekuratidzira kuti haufungi kubheka hukama zvachose. Chiziviso chepamutemo muUAE idanho rekutanga pamberi penyaya yepamutemo. Inogona kutumirwa kubva kumunhu kana kambani iyo kodzero dzepamutemo dzakatyorwa kana kuti yakakuvara zvakaipisisa pamutemo kuti ipe anotambira mukana wekupedzisira kugadzirisa gakava pasina kutongwa kwedare. Mamwe mamiriro ezvinhu anoda kutumira ziviso yepamutemo, uye inosanganisira:
Cherechedzo inoshandirwa nemushandirwi kumushandi nekuda kwekutyora mazwi muchibvumirano chevashandi, kushungurudzwa pabonde kweanoshanda naye, kutyora kambani mitemo yeHR, nekukurumidza kuenda zororo pasina ziviso yepamutemo, nezvimwewo.
Cherechedzo kubva kumushandi kuenda kumushandi kuti inononoka kana kubhadharwa muhoro, kutyora chibvumirano chebasa, kubviswa pasina chikonzero chakakodzera, nezvimwe.
Cherechedzo yakapihwa vachipesana neanopa cheki mune chiitiko chekubhaiswa cheki.
Zvivakwa zvine chekuita nenharo dzakadai sekubhadhara dzimba uye zvekupokana muridzi, kudzinga vanhu nekukurumidza,
Nyaya dzemhuri dzakadai sekurambana, kuchengetwa kwemwana, kana kupokana zvine chekuita nenhaka, nezvimwe.
Zivisai kumakambani ekugadzira mukunyunyuta pamusoro pekuunzwa kwezvinhu zvakagadzirwa pasi kana kupa mabasa asina kunaka, nezvimwe.
Yedu masevhisi Ekutumira Pamutemo ziviso
Iwe unogona kuhaya gweta rine ruzivo kuti rikubatsire kunyora runyorwa rwemutemo chiziviso uye kurishandira kune irikutadza pati. Rudzi urwu rwemutemo rinokurukura newe nezve mamiriro acho, kuongorora zvese chokwadi chenyaya uye kukuyambira pane zvese zvingave zvichiitika pamutemo, uye nekubatsira kunyora chakakodzera chiziviso chepamutemo usati washandira mudhiriri wako.
Heano maitiro anoenda:
Zvinotanga nechikamu chepamutemo chekupa zano pamusoro pefoni, online, kana muhofisi umo gweta rinopindura mibvunzo yako nekupa zano. Kana gweta richinge ragamuchira zvese zvinyorwa zvine chekuita nenyaya iyi, iye achazokurukura mamiriro ezvinhu newe uye nekurudzira mutsetse wekuita wakanyanya kunaka.
Gweta rako rinonyora chiziviso chepamutemo woritumira kwauri kuti uongorore uye ubvumire.
Kana ichinge yabvumidzwa, Gweta rinoshandira anopikisa iwe ziviso kuburikidza nerejista tsamba, fakisi, kana email.
Gweta gweta Gweta rinodzivirira chero ruzivo uye gwaro rawakagoverana negweta rako.
Kunyangwe isiri nyaya dzese dzinoda kuti chiziviso chepamutemo chitumirwe, zvakadaro, inotumirwa nemagweta mutariro yekuti makakatanwa ari pakati pevatengi pamwe neanopikisa anogona kugadziriswa pasina kutongwa kwedare. Kutumira chiziviso chepamutemo kunobvumidza anotumira kuendesa chinangwa chavo chekusvitsa kugadziriswa kwenyaya neyeanogamuchira pasina kunetsekana kwekutongwa kwematare edare.
Tinogona kukubatsira mukugadzirira nekutumira ziviso yepamutemo.
Nzira yepamutemo yekushandira ziviso